Mid kasta oo OS kasta daaqadaha in loo abuuray by Microsoft oo ay u sabab tahay xaqiiqda ah in user ka codsan kartaa hababka iyo sidoo kale hababka guud ee la xiriirta hababka kale ee la bilaabay shirkad la mid ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira waa inay hubiyaan in hababka loo adeegsado ama haddii kale OS waa si baaxad in muddo ah size iyo duluc in user ka heli doonaa isaga qudhiisa badiyay dhexdiisa iyo mararka qaar geeridu waa sida guud ee nidaamka dhaawac ku dhici kara ee la xiriira mowduucan. The horumarinta OS daaqadaha ayaa ugu danbeysay ee laga helay ay ugu sarreysa oo ay tahay qaab ka mid ah daaqadaha 10 kaas oo laga bilaabi doonaa 29-kii July 2015 iyo sida Microsoft waa version ugu dambeeyey ee taxanaha daaqadaha. Tutorial waxaa loo qoray si ay u hubiyaan in daaqadaha 10 mawduucyada in ay yihiin ay khuseyso aan kaliya ka wada hadlay si faahfaahsan weyn laakiin casriga ah ee isticmaala bixio sidoo kale ka heli aragti ah helay ee ku saabsan mawduuca si u baahan tahay isbedel iyo sidoo kale fulinta oo ka mid ah daaqadaha 8 mawduucyada aan waa shaqo adag oo dhan. Sida la soo sheegnay in user awood u yeelan doonaan in ay isticmaalaan mawduucyada la xiriira iyo functionalities ah habka ugu fiican marka ay timaado Microsoft madal Sidaa darteed waxaa muhiim ah in la ogaado in user Hubi in ka dhigi kartaa in uu hababka in halkan lagu yihiin codsatay in hab ay la qoray si dhib kasta waa laga fogaadaa in arrintan la xiriira.
10 daaqadaha u qurux badan 10 mawduucyada daaqado 8
Beddelidda mawduucyada daaqadaha 8
Ka dib waa tobanka mawduucyada ugu muhiimsan, waxtar leh iyo qurux badan marka ay timaado daaqadaha 10 Oo kuwanuna daaqadaha oo dhan waxaa laga dalban karaa 8 iyo sidoo kale daaqadaha 7 aan wax arrin oo dhib.
Haddii user waxaa u sawir tayo leh oo qumman oo heerka pixel sare gundhig gudahood mawduuc raadinaya markaas tani waa mid ka mid ah ay tahay in la soo bixi si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan oo gobolka ka mid ah natiijooyinka farshaxanka. Mawduucan madow ayaa waxaa loogu talo galay dadka isticmaala oo Cunid midabo madow ama la mid ah.
Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka of tahay mawduuc dhalaalaya daaqado 10 in lagu saleyn karaa daaqadaha 8 fudayd iyo qanacsanaanta. Waxa ay taageertaa oo dhan midabada daaqadaha 8 oo sidaas daraaddeed waa ciyaar fiican oo dhan isticmaala kuwaas oo raadinaya si loogu badalo daaqadaha ay 8 ilaa 10 iyadoo la adeegsanayo mawduucyada.
3. White Dior
Theme iftiin in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada farshaxanka ee la xidhiidha wax soo saarka sida calanka iyo qaab-dhismeedka gudaha ayaa la sameeyey si waafaqsan shuruudaha user sidaa darteedna aragti fiican oo aan fiicnayn ee ka dhigi lahaa arrintan la xiriira.
Iyadoo jir ah oo gebi ahaan cusub iyo aragti theme yahay kaamil ah labada daaqadaha 8 iyo daaqadaha 10 oo sidaas daraaddeed shaqeynta madal cross waa arrin horay loo gundhig ay gudahood ah si loo hubiyo in user ma aha oo kaliya downloads waxay laakiin sidoo kale waxa uu u adeegsanayaa si aad u hesho sameeyo shaqada oo aan wax arrintan iyo dhibaato.
The users kuwaas oo loo isticmaalo OS chromium in la soo saaro by Google laftiisa doonaa xaqiiqo ah oo aqoon u leh magaca iyo shaqeynayaan ah. Waa in la ogaadaa in user waa in dejisan iyo rakibi theme ee daaqadaha 8 si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyo habka uu u muuqdo mid wanaagsan oo cusub.
6. Gray theme 8 midabka pack
Iyadoo daaqadaha hufan waa mid ka mid ah mawduucyada ugu cajiib ah in daaqadaha 10 dalabyo iyo OS kale oo ay ku jiraan daaqadaha 8 iyo 7 si fudud u soo bixi kartaa, rakibi iyo waxa maamula si ay u hubiyaan in theme waxaa laga codsadaa in sida ugu wanaagsan ee.
7. Space blåbær
Iyada oo mugdi magacaabay muuqaal ah waa theme ugu fiican in la hubiyo in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka ee la xiriirta daaqadaha 8 OS ka dhigi kara. Theme waxaa laga dalban karaa iyada oo aan wax dhibaato ah loo eegin xaqiiqda ah in la soo saaro daaqado 10.
8. Work daaqado 10
Iyadoo interface madow Daawatay iyo gobolka oo ka mid ah aragtida daaqadaha tahay suuqa kala taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo natiijada ugu fiican ee aan wax arrintan iyo dhibaato. Theme Tani madow xaqiiqdii waa waxa ugu fiican kuwa Cunid qaadan mawduucyada midab la mid ah.
9. uu yahey theme madow
Hore u sameeyey daaqadaha 8 theme ayaa u haayay daaqado 10 oo ay tahay in la xuso in user inay hubiyaan in version ku haayay waxaa sidoo kale loo isticmaalaa iyada oo aan arin kasta sidii loo baaro si guul leh oo isticmaalaya daaqadaha 8, 8.1 iyo daaqadaha 7 ka dhigi kartaa . theme waa inuu xaqiijiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee la xiriirta nidaamka iyo sidoo kale daaqadaha guud 8-dhismeedka iyo sidoo.
Theme 10. Elune
Sidoo kale waa mid ka mid ah mawduucyada hufan ugu wanaagsan ee la heli karo online si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay marka ay timaado jecel qabo mawduucyada hufan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in theme waxaa marka hore si aad u hubiso ka hor guud go'aanka isbedelka la sameeyo codsatay sameeyo.
Ka dib waa habka ay tahay in la codsatay in arrintan la xiriira:
1. user wuxuu u baahan yahay in midig u guji desktop-ka, ka dibna hubi in doorasho la shakhsiyeeyo la xushay:
2. Doorashada mawduucyada markaas waxaa loo arki karaa hore sidii loo sawiray in shaashadda hoose:
3. theme ayaa ay tahay in la soo xulay ay tahay in la riixi iyo in ay tahay. Saar uga tago OS sida si toos ah loo bedeli doonaa mawduuc aan arin kasta:
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan My Family for Windows Phone
Siyaabo Free inuu ku biirayo Xogta laga Nokia in Windows Phone
> Resource > Windows > Top 10 Windows 10 mawduucyada for Windows 8